Zvemari Franchise Kutengesa | Mukana weFrancise | Franchiseek
Franchiseek»Mukana weFrancise»United Kingdom»Zvemari Franchise
Pari Nyowani Franchises
SME Unyanzvi Academy
Kana zvakakosha zvekutengesa, tinunura! Iyo SME Skills Academy franchise chirongwa ndeye nyanzvi bhizinesi solution, kukupa zvese iwe ...
Chii chinonzi Bartercard uye ndeapi masevhisi aanopa? Kubva kuvambwa kweBartercard muna1991, mabhizinesi akapararira mukati ...
Nekuwedzera kwevanhu vachimhanyisa mabhizinesi avo pakave nekuwedzera kwebasa rezvemari sekudzikisira kwemitengo, zvikwereti uye accountant services. Nekugara kuchikosha kudikanwa kwemasevhisi aya izvi zvinogona kuratidza kuti zvino inogona kunge iri nguva yekudyara mune yemari franchise.
Ndedzipi mhando dzemari franchise iripo?
Sezvakanyorwa pamusoro apa pane dzakawanda sarudzo dzakasiyana dzakatenderedza iyo yese masevhisi emari masevhisi akadai sechikwereti maseti semuenzaniso isu tinopa akawanda akasiyana masango ekukomberedza zvikamu zvese izvi zviri chikamu chedu chemari. Saka kana iwe uchitsvaga chero mukana uri mubazi rezvemari mupasi rose asi usine chokwadi chekuti indasitiri ipi yaungade kubatanidzwa nayo Ndinokurudzira zvikuru kuve nekuverenga kuburikidza nedhairekitori redu.
Statistics kutenderedza bhizinesi chikamu.
Nhamba idzi dzinoratidza kuti vangani mabhizinesi ari kuuya achimhanyisa mabhizinesi avo mazuva ano pasi rese. Zvakare izvi zvichakupa nzwisiso diki kune rudzi rwemusika urwo paunodyara mune yemari franchise. Nekuti kuchave zvakare nekudikanwa kuri kukura kwemabasa emari kwevamabhizinesi vamangwana.
Kune mamirioni 582 emabhizinesi munyika.
MuBrazil 53% yevanamuzvinabhizinesi vari kushanda vese vari voga.
Huwandu hwepamusoro hwevashandi vanozvishandira (19.6%) vanoshanda mumunda wekuvaka / unotengesa.
83.1% yevaridzi vebhizinesi veUS vakatanga makambani avo.
22.5% yemabhizinesi madiki anokundikana mugore rekutanga.
Aya manhamba anoratidzei kune chikamu chemabasa emari?
Muhuwandu hwenhamba idzi dzinoratidza huwandu hukuru hwevatengi zvakare zvinoratidza kuti vanhu vazhinji vari kuita bhizinesi rose vari voga zvoreva kuti vangangoda rubatsiro rwemabasa senge accountant kana zvikwereti mune ramangwana. Mukupedzisa aya masiteki anoratidza danho rakakura revatengi uye nyika iri kuramba ichiwedzera yemikana kubva zvino vanhu vazhinji vava kuzviitira basa uye vari kuyedza kuita mabhizinesi avo.
Mhedziso yakatenderedza indasitiri yemari.
Kunyanya vanhu vari kuita bhizinesi ravo vari kuratidza maitiro akanyanya uye nekuchinja nzira dzatinoshanda nekuita zvinhu muchizvarwa chazvino. Asi izvi zvinoreva kuti vanhu vazhinji vari kuzoshaiwa mabasa emari sekudzikiswa kwemitengo kana accountant kubatsira bhizinesi ravo kubudirira zvakanyanya. Saka mukupedza ndingati iyo indasitiri yemabhizimusi emari ndeyakareruka bhizinesi semuenzaniso kana ikanyatsoitwa uye iri kuratidza zviratidzo zvakanaka zvekuwedzera kwemakore anotevera.